TARTAN AQOONEEDKA DUGSIGA JAABIR BIN XAYAAN (FARACA AFARTA JARDIINO) OO LA SOO GEBOGABEEYEY F3E VS F2B. – Mecca Al -Mukarama Foundation
Tartan aqooneedka heerka dugsiga sare ee dugsiga Jaabir Bin Xayaan (Faraca Afarta Jardiino) ayaa lagu soo gebogabeeyey xarunta dugsiga, tartankaan oo ah mid sanadkiiba laba mar la qabto ayaa teeramka hore ee sanad dugsiyeedka 2017/2018 waxaa isugu soo haray labada fasal ee kala ah F3E iyo F2B ka dib markii ay ka soo banbaxeen 17 fasal oo tartanka ka qaybgalay.
Labada fasal ayaa kulanka kama dambaysta ah si wanaagsan isugu diyaariyey iyadoo fasal walba koobka isu rajaynayey, si kastaba ha ahaatee labada fasal waxay soo bandhigeen tartan aad u qurxan oo su’aalaha inta badan aysan soo dhaafin ka qaybgalayaasha tartanka taasoo daliil u ah diyaargarowga labada fasal.
Natiijada tartanka ayaa ku soo idlaatay 14 dhibcood oo ay guushu ku raacday fasalka F3E halka fasalka F2B ay urursadeen 12 dhibcood.
Guddiga diyaarinta su’aalaha iyo garsoorka ayaa muddo afar bilood ah ku soo guda jiray qabashada tartan aqooneedka ugu dambayna ku soo dhammaaday guul iyo iyadoo ardaydu ka faa’iideysteen macluumaad faro badan oo xiriir la leh duruusta ay qaataan iyo aqoon guudba.
Dugsiga Jaabir Bin Xayaan ayaa sanad dugsiyeedkii tegay ahaa horyaalka aqoonta dugsiyada gobolka Banaadir ka dib markii ay ardayda dugsiga wax ka barato hantiyeen Koobka Tartan Aqooneedka Taleefishinka Universal sidoo kalena kaalinta labaad ka galeenTartan Aqooneedka Dugsiyada Sare ee Raadiyaha iyo Taleefishinka Goob joog.